महिलाको लागि पुरुष नै अन्तिम लक्ष्य होइनन्ः अभिनेत्री नीना गुप्ता - NayaMedia:: Naya Media । Leading Nepali News Portal
आइतवार, अशोज १४, २०७५ (September 30, 2018, 5:18 pm) मा प्रकाशित
८० दशकमा चर्चित बलिउड अभिनेत्री नीना गुप्ता पछि निर्माता र निर्देशकको रुपमा पनि सफल भइन् । उनी अहिलेसम्म पनि आफ्नो हट फोटोसुट, अफेयर, नयाँ सोच र अडानको कारण मिडियामा छाइरहन्छिन् र विवादमा पनि तानिन्छिन् ।
नीनाले सँधै फरक धारका फिल्म गरिन् र सफल रहिन् । उनी प्रसिद्ध क्रिकेटर भिभियन रिचार्ड्ससँगको प्रेम सम्बन्धको कारणले चर्चामा रहिन् । उनले विवाह नगरी आमा बनेर छोरी मसाबालाई जन्म दिइन् । यसलाई त्यतिबेलाको भारतीय समाजले पचाउन सकेन र उनको चर्को आलोचना समेत भयो । तर, उनी यस्ता कुराहरुलाई ध्यान नदिइकन अगाडि बढिन् । भिभियनले छोरीलाई आफ्नो नाम त दिए तर नीनालाई पत्नीको दर्जा दिएनन् ।
नीनाले ‘सिंगल मदर’ बनेर छोरीलाई हुर्काइन्, बढाइन् । अहिले उनी फेसन डिजाइनर बनेकी छिन् । पछि सन् २००८ मा नीनाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विवेक मेहरासँग विवाह गरिन् ।
नीना स्पष्टवक्ता हुन्, जसको असर उनको करियरमा पनि परेको छ । तर उनी यसबाट कत्ति पनि डगमगाइनन् । अहिले उनी फिल्म ‘बधाई हो’ को प्रमोशनमा छिन् । यस फिल्ममा उनले प्रौढावस्थाामा आमा बनेकी महिलाको भूमिका निभाएकी छिन् । उनीसँग भारतीय अनलाईन पोर्टल गृहशोभाले गरेको अन्तर्वाताको सम्पादित अंश:
यो फिल्म कसरी छनोट गर्नुभयो ?
जब यो फिल्मको कहानी मलाई सुनाइयो, त्यतिखेर नै धेरै राम्रो लाग्यो । लामो समयपछि यति राम्रो स्कृप्ट सुन्न पाएको महसुस गरेँ । र, खेल्न तयार भएँ ।
फिल्म प्रमोशन गर्ने अहिलेको शैली पहिलेको भन्दा कति फरक पाउनुभएको छ ?
त्यतिखेर समय यस्तो थिएन । फिल्म रिलिजअघि हामी पत्रकारलाई बोलाएर आफ्नो अन्तवार्ता लिन आग्रह गथ्र्यौं । अहिले त महिनौं अगाडिदेखि पब्लिसिटी चलिरहन्छ । मलाई यो पनि रमाइलो लागिरहेको छ ।
यो फिल्मको कथाले अहिलेको समाजलाई कति प्रतिबिम्बत गरेको छ ?
मलाई सम्झना आउँछ, सानोमा म दिल्लीमा हुँदा मेरो स्कूलकी उमेर छिप्पिएकी प्रिन्सिपल आमा बन्नेवाला थिइन् । उनले त्यतिबेला जागिर नै छोडिदिएकी थिइन् । स्कूलका बच्चाहरुले के भन्लान् भनेर उनी धेरै डराएकी थिइन् ।
बढी उमेरमा आमा बन्ने कुरालाई तपाईं वास्तविक जीवनमा कसरी लिनुहुन्छ ?
यो प्राकृतिक कुरा हो । यसबाट बचेर तपाईं जान सक्नुहुन्न । आजभोली आईभिएफ वा टेस्टटुयुवबाट बच्चा पैदा गरिन्छ जुन कुरा मलाई खासै राम्रो लाग्दैन । तर, यो प्रविधि बच्चा नहुने दम्पत्तीहरुको लागि भने लागि वरदान हो । धेरै उमेरमा आमा बन्नाले बच्चा र आमाको स्वास्थ्यमा गलत असर पर्न सक्छ । त्यसैले यस्तो निर्णय लिनुअघि धेरै विचार गर्नुपर्छ ।
फिल्म उद्योगमा भएको परिवर्तनलाई तपाईं कसरी लिनुहुन्छ ?
मेरो हिसाबले यो फिल्म उद्योगको स्वर्णकाल हो । म कि चाँडै जन्मिएँ भनेर कहिलेकाँही दुःख लाग्छ । हाम्रो समयमा यस्ता फिल्म नै बन्दैन थिए ।
आज मूख्य भूमिका गर्नको लागि उचाई धेरै हुनुपर्ने, गोरी र अनुहार सुन्दर देखिने हुनैपर्छ भन्ने छैन । आज राम्रो एक्टर हरेक खालको भूमिका निभाउन सक्छन् । मलाई पनि राम्रो भूमिका मिलिरहेको छ ।
अहिलेका आमाबुबा बच्चालाई लिएर धेरै आशावादी छन् । उनीहरु बच्चामाथि आफ्नो इच्छाहरु थोपर्छन् जसको प्रेसरले कहिलेकाहीँ बच्चाहरु डिप्रेसनको
शिकार हुन्छन् । तपाईं यस्ता आमाबाबुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
बच्चाको इच्छा हरेक आमाबुबाले बुझ्नुपर्छ । उनीहरु के कुरामा अब्बल छन् त्यो बुझ्न सजिलो छैन । मेरी छोरी मसाबाले फेसन डिजाइनर बन्छु भनेर कहिल्यै सोचेकी थिइन्, तर परिस्थितिको कारण उनले यो कोर्स कोर्स गर्नुपर्यो र राम्रो पनि भयो ।
तपाईंले जे गर्न पाउनु भएन त्यो बच्चाहरुमार्फत गर्न खोज्नु गलत हो । मैले यस्ता कैयौं महिलाहरु देखेको छु जो आँफै अभिनेत्री बन्न सकेनन् तर आफ्नो छोरीलाई अभिनेत्री बनाउन चाहन्छन् ।
अब तपाईंको के गर्ने इच्छा छ ?
मलाई लेख्ने सोख छ र विपन्न महिलाहरुको लागि केही काम गर्ने चाहना छ । उनीहरुको दुःख देख्दा मलाई निकै पीडा हुन्छ । हाम्रो देशमा गरीब महिला भएर जन्मिनु अभिशाप नै हो जस्तो लाग्छ किनभने महिलाहरु धेरै कुरा सहन्छन् र उनीहरुमा खुलेर अगाडि आएर भन्ने सामर्थ्य छैन ।
यस्ता महिलाहरुलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले महिलाहरुले पनि पैसा कमाउने बारेमा सोच्नुपर्छ । पैसा नै सबैथोक हो, त्यसले तपाईं सबैथोक किन्न सक्नुहुन्छ । यहाँसम्म कि प्रेम पनि । यस बाहेक जीवनमा तपाईंको लक्ष्य पुरुषलाई प्राप्त गर्ने हुनु हुँदैन । महिलाको जीवनमा पुरुषको साथ आवश्यक छ तर, पुरुष नै अन्तिम लक्ष्य होइनन् ।